MWC Shanghai 2018 မှာ ဘယ်လိုနည်းပညာသစ်တွေ မိတ်ဆက်ခဲ့သလဲ | Myanmar Mobile App
Home Uncategorized MWC Shanghai 2018 မှာ ဘယ်လိုနည်းပညာသစ်တွေ မိတ်ဆက်ခဲ့သလဲ
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းကျင်းပနေတဲ့ MWC Shanghai 2018 မှာနည်းပညာကုမ္ပဏီအများစုဟာ သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး ပေါ်နည်းပညာတွေကို ဝင်ရောက်ပြသလျက်ရှိပါတယ်။ ၃ရက်တာကျင်းပတဲ့ ဒီပွဲမှာတော့ Vivo ဟာ 3D Sensing နည်းပညာသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သလို Huawei ကလည်း 2019ခုနှစ်မှာ 5G Chips တွေထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ် . .. ..
Face ID ထက် ၁၀ ဆ ပိုမိုတိကျတဲ့ Vivo ရဲ့ 3D Sensing နည်းပညာ
Vivo အနေနဲ့ 3D Sensing နည်းပညာ အသစ်ကို ကြေညာလိုက်ပြီး Apple Face ID ထက် ၁၀ ဆ ပိုမိုတိကျတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Vivo က သူ့ရဲ့ Time of Flight (TOF) စနစ်ဟာ မျက်နှာကို သုံးဖက်မြင်စနစ်ဖြင့် အာရုံခံဖို့အတွက် ဒေတာ ပွိုင့်ပေါင်း ၃၀၀ ၀၀၀ ကို အသုံးပြုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Apple Face ID ကတော့ ဒေတာ ပွိုင့်ပေါင်း ၃၀ ၀၀၀ ကိုသာ ကောက်ယူပါတယ်။ ToF နည်းပညာဟာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကနေ sensor ဆီကို အလင်းပြန်လာတဲ့ ကြာချိန်ကို တွက်ချက်ကာ မျက်နှာပြင်ကို တိုင်းတာတာ ဖြစ်ပြီး သူ့ မှာပါတဲ့ sensor တွေဟာ iPhone X မှာ ထက် ပိုမိုရိုးရှင်းသေးငယ်သလို အလင်းဖွဲ့ စည်းပုံအခြေပြုတဲ့ 3D Scanner တွေထက်ပိုပြီး လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ ယခင်နှစ်က မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာ ကိရိယာ ကနေ မကြာခင်က ပြသခဲ့တဲ့ ဘောင်ပျောက် Vivo NEX ၊ ယခု TOF 3D Sensing နည်းပညာများအထိ Vivo ဟာ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ နည်းပညာများကို ဖန်တီးနေပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ Consumer များကို AI က ကူညီနိုင်အောင်လည်း ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ “ လို့ Vivo ရဲ့ အကြီးတန်း ဒုတိယ ဥက္ကဌ Alex Feng က ပြောပါတယ်။
TOF စနစ်က သူ့အရှေ့ သုံးမီတာ အကွာအတွင်းမှ အရာဝတ္ထုများကို တိကျစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး ဒီနည်းပညာဟာ 3D Photography , AR , မျက်နှာ၊ Gesture နဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို အာရုံခံခြင်းများမှာ အလွန်တိုးတက်လာစေမယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။ Vivo က သူ့ရဲ့ TOF နည်းပညာဟာ Concept အဆင့် မဟုတ်တော့ပေမယ့် စမတ်ဖုန်းများမှာ ထည့်သွင်း ရောင်းချဖို့ အချိန်တော့ လိုပါသေးတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ 5G Chips နဲ့စမတ်ဖုန်းကို ရောင်းချမယ့် Huawei
တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Huawei ကလည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လမှာ 5G Chips နဲ ဇွန်လမှာ 5G Phone များကို မိတ်ဆက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လက်ရှိမှာ 5G ဟာ ဈေးကွက်ထဲကို မရောက်ရှိသေးပါဘူး။ ကုမ္ပဏီများက သူတို့ရဲ့ 5G Device များကို ရောင်းချမယ့် အစီအစဉ်များကို ကြေညာနေကြပါတယ်။ Huawei က အခြား ကုမ္ပဏီများမှ စမတ်ဖုန်းများမှာလည်း သူ့ရဲ့ 5G Modems များကို ထည့်သွင်းထားကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ Huawei အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ 5G Chip ရဲ့ အမည်နဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကိုတော့ မပြောကြားသေးပါဘူး။
Huawei ရဲ့ ပထမဆုံး 5G Phone ဟာ Mate 30 ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ 5G ကွန်ရက်တွေဟာ မိုဘိုင်း ဗွီဒီယို streaming စနစ်နဲ့ AR ၊ VR နဲ့ Mixed Reality လိုမျိုး အနာဂါတ်နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများကိုပါ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာပါ။ Huawei ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ 5G base station ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရှားရှားပါးပါး ကုမ္ပဏီ ၅ ခုထဲမှာ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး တရုတ်မှာတော့ ZTE နဲ့ Datang Telecom ၊ ဆွီဒင်မှ Ericsson နဲ့ ဖင်လန်မှ Nokia တို့ ပဲ 5G စမတ်ဖုန်းထုတ်ဖို့ အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။ Huawei က 5G Chip များကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်မှာ သေချာပါတယ်။
တရုတျနိုငျငံမှာ ယခုရကျပိုငျးအတှငျးကငျြးပနတေဲ့ MWC Shanghai 2018 မှာနညျးပညာကုမ်ပဏီအမြားစုဟာ သူတို့ရဲ့နောကျဆုံး ပျေါနညျးပညာတှကေို ဝငျရောကျပွသလကျြရှိပါတယျ။ ၃ရကျတာကငျြးပတဲ့ ဒီပှဲမှာတော့ Vivo ဟာ 3D Sensing နညျးပညာသဈကို မိတျဆကျပေးခဲ့သလို Huawei ကလညျး 2019ခုနှဈမှာ 5G Chips တှထေုတျလုပျသှားမယျလို့ ကွငွောခဲ့ပါတယျ . .. ..
Face ID ထကျ ၁၀ ဆ ပိုမိုတိကတြဲ့ Vivo ရဲ့ 3D Sensing နညျးပညာ
Vivo အနနေဲ့ 3D Sensing နညျးပညာ အသဈကို ကွညောလိုကျပွီး Apple Face ID ထကျ ၁၀ ဆ ပိုမိုတိကတြယျလို့ ပွောပါတယျ။ Vivo က သူ့ရဲ့ Time of Flight (TOF) စနဈဟာ မကျြနှာကို သုံးဖကျမွငျစနဈဖွငျ့ အာရုံခံဖို့အတှကျ ဒတော ပှိုငျ့ပေါငျး ၃၀၀ ၀၀၀ ကို အသုံးပွုတယျလို့ ပွောပါတယျ။ Apple Face ID ကတော့ ဒတော ပှိုငျ့ပေါငျး ၃၀ ၀၀၀ ကိုသာ ကောကျယူပါတယျ။ ToF နညျးပညာဟာ အရာဝတ်ထုတဈခုကနေ sensor ဆီကို အလငျးပွနျလာတဲ့ ကွာခြိနျကို တှကျခကျြကာ မကျြနှာပွငျကို တိုငျးတာတာ ဖွဈပွီး သူ့မှာပါတဲ့ sensor တှဟော iPhone X မှာ ထကျ ပိုမိုရိုးရှငျးသေးငယျသလို အလငျးဖှဲ့စညျးပုံအခွပွေုတဲ့ 3D Scanner တှထေကျပိုပွီး လိုကျလြောညီထှမှေု ရှိတယျလို့ဆိုပါတယျ။
“ ယခငျနှဈက မိတျဆကျခဲ့တဲ့ မကျြနှာပွငျအောကျ လကျဗှရော ကိရိယာ ကနေ မကွာခငျက ပွသခဲ့တဲ့ ဘောငျပြောကျ Vivo NEX ၊ ယခု TOF 3D Sensing နညျးပညာမြားအထိ Vivo ဟာ ထူးခွားဆနျးသဈတဲ့ နညျးပညာမြားကို ဖနျတီးနပေါတယျ။ အနာဂတျမှာ Consumer မြားကို AI က ကူညီနိုငျအောငျလညျး ပွုလုပျပေးမှာပါ။ “ လို့ Vivo ရဲ့ အကွီးတနျး ဒုတိယ ဥက်ကဌ Alex Feng က ပွောပါတယျ။
TOF စနဈက သူ့အရှေ့ သုံးမီတာ အကှာအတှငျးမှ အရာဝတ်ထုမြားကို တိကစြှာ ခှဲခွမျးစိတျဖွာနိုငျပွီး ဒီနညျးပညာဟာ 3D Photography , AR , မကျြနှာ၊ Gesture နဲ့ လှုပျရှားမှုကို အာရုံခံခွငျးမြားမှာ အလှနျတိုးတကျလာစမေယျလို့ ကုမ်ပဏီက ပွောပါတယျ။ Vivo က သူ့ရဲ့ TOF နညျးပညာဟာ Concept အဆငျ့ မဟုတျတော့ပမေယျ့ စမတျဖုနျးမြားမှာ ထညျ့သှငျး ရောငျးခဖြို့ အခြိနျတော့ လိုပါသေးတယျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ 5G Chips နဲ့စမတျဖုနျးကို ရောငျးခမြယျ့ Huawei
တရုတျစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူ Huawei ကလညျး ၂၀၁၉ ခုနှဈ မတျလမှာ 5G Chips နဲ ဇှနျလမှာ 5G Phone မြားကို မိတျဆကျမယျလို့ ပွောပါတယျ။ လကျရှိမှာ 5G ဟာ ဈေးကှကျထဲကို မရောကျရှိသေးပါဘူး။ ကုမ်ပဏီမြားက သူတို့ရဲ့ 5G Device မြားကို ရောငျးခမြယျ့ အစီအစဉျမြားကို ကွညောနကွေပါတယျ။ Huawei က အခွား ကုမ်ပဏီမြားမှ စမတျဖုနျးမြားမှာလညျး သူ့ရဲ့ 5G Modems မြားကို ထညျ့သှငျးထားကွမယျလို့ပွောပါတယျ။ Huawei အနနေဲ့ သူ့ရဲ့ 5G Chip ရဲ့ အမညျနဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကိုတော့ မပွောကွားသေးပါဘူး။
Huawei ရဲ့ ပထမဆုံး 5G Phone ဟာ Mate 30 ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ 5G ကှနျရကျတှဟော မိုဘိုငျး ဗှီဒီယို streaming စနဈနဲ့AR ၊ VR နဲ့Mixed Reality လိုမြိုး အနာဂါတျနညျးပညာ ဝနျဆောငျမှုမြားကိုပါ အဆငျ့မွှငျ့တငျပေးနိုငျမှာပါ။ Huawei ဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ 5G base station ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ရှားရှားပါးပါး ကုမ်ပဏီ ၅ ခုထဲမှာ တဈခု ဖွဈပွီး တရုတျမှာတော့ ZTE နဲ့Datang Telecom ၊ ဆှီဒငျမှ Ericsson နဲ့ဖငျလနျမှ Nokia တို့ပဲ 5G စမတျဖုနျးထုတျဖို့အနီးစပျဆုံး ဖွဈနပေါတယျ။ Huawei က 5G Chip မြားကို ကိုယျတိုငျ ထုတျလုပျမှာ သခြောပါတယျ။
Previous article6.9 လက်မမျက်နှာပြင်နဲ့ ထွက်လာမယ့် Huawei Honor Note 9
Next articleOppo Find X စမတ်ဖုန်းအားတရုတ်နိုင်ငံတွင် တရားဝင်မိတ်ဆက်